ပြောင်းလဲချင်ရင် ကျောင်းထဲမဝင်နဲ့… – PVTV Myanmar
· 8 months ago ·22 Comments
လက်ရှိကာလသည် အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်လူသတ်စစ်ကောင်စီက တက္ကသိုလ်ကျောင်းများကို အတင်းအကျပ် ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသလို ၎င်းတို့၏ အာဏာသိမ်းမှုကို အကြမ်းမဖက် အာဏာဖီဆန်ရေး CDM ဆောင်ရွက်နေသော တက္ကသိုလ် ဆရာ/ဆရာမများနှင့် ပညာရေးဝန်ထမ်းများကို အလုပ်မှထုတ်ပယ်လျက်ရှိနေပါသည်။
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ၏ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြလျက်ရှိသော ပြည်သူများကိုပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် ပြည်သူ ၉၀၀ နီးပါး ကျဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်သလို ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးကလည်း အကြမ်းဖက်လူသတ်စစ်တပ်အနေဖြင့် အရပ်သား အစိုးရကို အာဏာပြန်လွှဲပေးရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝဖော်ဆောင်ပေးရေးတို့ကို တောင်းဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။
သို့ရာတွင် လူသတ်စစ်ကောင်စီမှ ပြည်သူလူထုနှင့် ကမ္ဘာ့အသိုင်းအဝိုင်း၏ တောင်းဆိုချက်များကို လျစ်လျူရှုပြီး တက္ကသိုလ်ကျောင်းများကို လက်နက်ကိုင်စစ်သားများစောင့်ကြပ်လျက် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိနေပါသည်။ ထိုအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလူငယ်များကို မေးမြန်းခဲ့သည်များကို တင်ဆက်လိုက်ရပါသည်။
Like – 4.5K Share – 518
Aung Theim Han says:
2021-05-12 at 6:00 PM
Khant Oo Mhan says:
2021-05-12 at 6:03 PM
ဧကီ ညီ says:
2021-05-12 at 6:04 PM
Nyo Nyo Mgk says:
2021-05-12 at 6:05 PM
2021-05-12 at 6:12 PM
2021-05-12 at 6:15 PM
Yar Zar Aung says:
2021-05-12 at 6:19 PM
Pyae Sone ခွေးတွေအုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်
2021-05-12 at 6:21 PM
2021-05-12 at 6:26 PM
ကျောင်းမတက်ကြသူများ၊မိဘများ၊ဆရာ၊ဆရာမများ နှင့်ပြည်သူများအားလုံး သည် သူရဲကောင်းများဖြစ်ကြသည်။ လေးစားပါသည်။ အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။
2021-05-12 at 6:54 PM
အေ့လေ တိုင်းပြည်ကိုတောင် သေနတ်ထောက်ပီး လုသေးတာပဲ
2021-05-12 at 7:13 PM
2021-05-12 at 7:21 PM
ဒိုးခပါပဲကြာ! တေနကုန္ေအာင္ ထိုင္ၿပီးေတာင္းဆိုေနလည္း အပိုပဲ စစ္အာဏာရွင္ကို စစ္ေရးအရ တိုက္ယူရမယ္ ေတာင္းဆိုေနလို႔ အလုပ္မျဖစ္ဘူး တိုင္း ျပည္နာမွာစိုးလို႔ ေပ်ာတိေပ်ာ့ဖက္လုပ္ၿပီး ေဆြးေႏြးလိုက္ ေတာင္းဆိုလိုက္ ရပ္တည္လိုက္ဆိုတဲ့ အရာေတြနဲ႔အလုပ္မျဖစ္သလို မထိေရာက္ဘူး ထိေရာက္ေသခ်ာတာကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ကို စစ္ေရးအရ တန္ျပန္တိုက္ကို တိုက္မွရပါမယ္ အဲ့သလိုမွ မဟုတ္ပဲ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အထင္ႀကီးၿပီး ေဆြးေႏြး ေတာင္းဆိုေနရံုနဲ႔ေတာ့ မလုပ္မျဖစ္ဘူးလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္
ကျန်စစ်မင်း မင်း says:
2021-05-12 at 7:36 PM
ကျောင်မအပ်ပါ ကျောင်းမတက်ပါ stay at home. CDM students. အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်
U Tin Nyunt says:
2021-05-12 at 7:38 PM
စစ်ကျွန်ပညာရေးကမ်ပိန်းအဖြစ် နီပိန်းကြောင်တွေ ကပုံဖော်ဟစ်နေကြတာ။ပညာ သင်ကြားရေးကို ပြင်စေချင်တာလား။ပညာရေးဆရာ/ဆရာမများကို ပြန်လည်ပြီး ခေတ်နဲ့ညီတဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့ အရည်အသွေးပြည့်ဝတဲ့သင်တန်းတွေပေး‌ပြောင်းချင် တာလား။သင်နည်းစနစ်တွေ ကြောင့်ဆိုရင် တစ်ဖြေးဖြေး သင်ကြားပြီးလိုအပ်တာတွေကို ပြောင်းလဲသင်လို့ရပါတယ်။စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလတစ်လျှောက် ပညာ မသင်ရေးဆိုရင်တော့ ခလေးတွေ အသက်တွေကြီး အချိန် တွေကုန်သွားမှာ။မှန်မှန်ကန်ကန်‌ေဝဖန် စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ်။
ဒေါ် ခင်သီတာ အောင် says:
2021-05-12 at 7:50 PM
Daw Zin Lay says:
2021-05-12 at 8:06 PM
2021-05-12 at 8:12 PM
ကျောင်းမတက် ဘဲ တိုက်ပွဲဝင် နေကြသော ဆရာ/မ များ၊ ကျောင်းသူ/သား များ ဘေးကင်းလုံခြုံပါစေ။
2021-05-13 at 12:10 AM
2021-05-13 at 5:20 AM
စစ်အာဏာ ရှင် စနစ်..အတွက်…ရရာ..
သေခါနီးဆဲ..လူနာ ဖြစ်နေ ပါစေ…ဒီအချိန်မှာ…စုပေါင်း အားနဲ့ ညီညီညွတ်ညွတ် တိုက်ထုတ်ကြပါစို့….
ပြည်သူ့ အရေးတော်ပုံ အောင် ရမည်
Sawdo Wah says:
2021-05-13 at 6:40 AM
အရေတော် ပုံး အောင်ရမည်း
Thi Ha Aung says:
2021-05-13 at 10:12 AM
2021-05-16 at 11:49 AM
-CDM ဝန်ထမ်းတွေဟာ မိမိတို့ရဲ့ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာကိစ္စရပ်…
တော်လှန်ရေး ကာလအတွက် စိတ်ကျန်းမာရေးအကြံပြုချက်များ…